I-Low-voltage Metal Fixed switchgear, i-China Low-voltage Metal Fixed switchgear Abavelisi, abaXhasi, abaFektri-NANTONG RONGHENG
Ikhaya>iimveliso>Inkqubo yoLawulo oluzenzekelayo>Amandla ombane amancinci ombane oguqulweyo
imodeli Ulinganiswe umbane（V） Ikalwe ngoku） A） Kulinganiswe ngoku kokuqhekekaA kA） Ikaliwe ixesha elifutshane ukumelana ngoku1s （kA） Ikaliwe incopho ukumelana yangokuA kA）
GGD1 380 1000 15 15 30
B 600 （630）
GGD2 380 I-1500 （1600） 30 30 63
GGD3 380 3150 50 50 105
● Ikhabhinethi yohlobo lwe-GGD yohlobo lwe-AC low-voltage switchgegear isebenzisa uhlobo lwekhabhinethi ngokubanzi. Isakhelo senziwe nge-8MF yentsimbi ebandayo ebunjiweyo. Amalungu esakhelo kunye neendawo ezikhethekileyo ezixhasayo ziveliswa kwaye zibonelelwa yinkampani yethu ukuqinisekisa ukuchaneka nomgangatho ophezulu wekhabhinethi. Izinto zekhabinethi yendalo iphela ziyilelwe ngokomgaqo wemodyuli, kwaye kukho imingxunya yokufaka imodyuli engama-20, kwaye umlinganiso wendalo iphezulu. Ngaba inokuvumela inkampani ukuba iphumelele kwimveliso yangaphambi kokuveliswa. Ayiphelisi kuphela umjikelo wemveliso, kodwa ikwaphucula ukusebenza kakuhle komsebenzi.
● Uyilo lwekhabhathi ye-GGD luthathela ingqalelo ngokupheleleyo ukusasazeka kobushushu ngexesha lokusebenza kwekhabhinethi. Kukho amanani ahlukeneyo okusasazeka kobushushu kwiindawo eziphezulu nasezantsi zekhabhinethi. Xa izinto zombane kwiKhabinethi zishushubeza, ubushushu bunyuka bukhutshwe kwislot ephezulu, kwaye umoya obandayo uyaqhubeka ukongezwa kwikhabhinethi kwislot esezantsi ukwenza ikhabhathi etywiniweyo ngokwakho Umjelo womoya wendalo wenziwe ukusuka ezantsi Ukufikelela kwinqanaba lokuphelisa ubushushu.
● Umnyango wekhabinethi uqhagamshelwe kwisakhelo sekhabhathi ngesixhobo esijikelezayo, kulula ukuyifaka nokudibanisa. Umtya wokutywina omile okweentaba ubekwe ngaphakathi komda wokugoba emnyango. Umtya wokutywina phakathi komnyango kunye nesakhelo une-stroke yoxinzelelo xa umnyango uvaliwe.
● Umnyango wesixhobo exhotyiswe ngezinto zombane uqhagamshelwe kwisakhelo esineentambo ezininzi zocingo lobhedu oluthambileyo. Amalungu okufakela kwikhabhinethi adibene nesakhelo yi-washer knurled, kwaye yonke ikhabinethi yinkqubo epheleleyo yokukhusela umhlaba.
● Umphezulu wekhabhathi uphathwa ngenkqubo yokutshiza ngombane ophezulu. Ngokunamathela okuqinileyo kunye nokuthungwa okuhle.
● Isigqubuthelo esiphezulu sekhabhathi sinokususwa xa kufuneka silungiselele ukuhlangana kunye nokulungiswa kwebarbar ephambili esizeni. Iimbombo ezine zekhabhinethi ephezulu zixhotyiswe ngamakhonkco okunyusa kunye nokuhambisa.
● Inqanaba lokhuselo lwekhabhathi yi-IP30, abasebenzisi banokukhetha phakathi kwe-IP20, IP40 ngokweemfuno zemo yokusetyenziswa